Halkee Somalia ka gashay liiska la-dagalanka musuqa? - Caasimada Online
Home Warar Halkee Somalia ka gashay liiska la-dagalanka musuqa?
Halkee Somalia ka gashay liiska la-dagalanka musuqa?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Isbaheysiga caalamiga ah ee ka dhanka ah musuq-maasuqa ayaa soo saaray warbixin ku saabsan qiimeyn lagu sameeyay wadamada caalamka oo dhan, kuwaas oo wax is dabarmarin sameeyay iyadoo lagu jiro la tacaalidda xanuunka COVID19.
Xanuunka safmarka ah ee Covid19 ayaa hoos u dhigay dhamaan dhaqaalaha wadamada caalamka, taasna waxey keentay in qiimeyn la sameeyo, waxaana warbixintaan oo ay soo saartay Transparency International ayaa qeexda dalalka sida ay u kala sareeyaan & sidey u kala hooseyaan iyadoo la adeegsanayo cel-celis ahaan (%).
Sidoo kale xogtaan waxaa ku dhex Milan sida ay dowladaha uga feejigan yahiin la dagaallanka musuq-maasuqa.
Wadanka Nepal ayaa noqday kan ugu musuq-maasuqa badan qaaradda Asia sida lagu xusay warbixinta soo baxday, wadamada meesha hoose ka galay waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 12% heshay, waxaana ku heer ah wadanka Koonfurta Suudaan.
Dhanka kale Suuriya ayaa heshay qiimeyn dhan 14% halka Yemen oo ka mid ah dalalka ay dagaallada iyo dhibaatooyinka ka jiraan ay gaartay 15%.
Wadanka Soomaaliya liiskaan muddooyinkii ugu dambeeyayba waxey kasoo galayeen meel hoose, halka wadamada qaar uu isbadal ku yimid.